Erdogan oo dadkiisa ugu baaqay inay qaadacaan badeecadaha Faransiiska. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Erdogan oo dadkiisa ugu baaqay inay qaadacaan badeecadaha Faransiiska.
Erdogan oo dadkiisa ugu baaqay inay qaadacaan badeecadaha Faransiiska.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo shaqaalaheeda khamiista u fasxeysa dhalashada Suubbanaheena.
Next articlePakistan: Qarax ka dhacay Peshawar oo sababay dhimasho iyo dhaawacyo.